မလေးအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(545 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ...လောင်းကစားဝိုင်းအများစုဟာပုံစံများကိုမလေးရှားမှာရှိတဲ့ဥပဒေရေးရာသော်လည်း, ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဒေသခံမွတ်စ်လင်ထိုကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်ပြုမထားပေ။ မလေးရှားခုနှစ်, လောင်းကစားရုံဂိမ်း, ဂိမ်းစက်တွေနှင့်ထီရှိပါတယ်။ မြင်းပြိုင်ပွဲ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, အားကစားလောင်းကစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုတားမြစ်သည်။ 2010 များတွင်တစ်ခုကြိုးပမ်းမှုအားကစားလောင်းကစား restore စေခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သာထုတ်ပေးလိုင်စင်မကြာမီဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
မလေးရှားများတွင်တစ်ဦးတည်းသာလောင်းကစားရုံ Genting (Genting) လည်းမရှိ။ ဒါဟာမျှမျှတတကြီးမားသောနှင့်မကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မလေးရှားတရားဝင်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကဒ်ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်မည့်တိုင်းပြည်အတွက်သာနေရာအရပ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား directory ထဲတွင်သတိပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သော alignment ကိုအဆက်မပြတ်မလေးရှားအစိုးရတိုက်ခိုက်နေသောလျှို့ဝှက်လောင်းကစားရုံများနှင့်အားကစားလောင်းကစားများ၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အခက်အခဲများမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
အစောပိုင်းကတစ်ဦးလောင်းကစားရုံများနှင့်အတူ, မလေးရှားထိုသို့သောအီလက်ထရောနစ်ခုန်အဖြစ်ကွန်ပျူတာဂိမ်းနှင့်အတူ slot ကစက်တွေရှိကြ၏။ သူတို့နိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်အဖြစ် 2000 ခုနှစ်တွင်သို့သော်ဤအသေးစားလောင်းကစားခန်းမ, အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ပိတ်ထားပြီ။
မလေးရှားနိုင်ငံဥပဒေအွန်လိုင်းလောင်းကစားလောင်းကစား၏ဤပုံစံကိုပိတ်ထား။ အစိုးရကနိုင်ငံတွင်းရှိကာစီနိုလောင်းကစားရုံများဖွင့်လှစ်မယ့်လိုင်စင်ပေးရန်နှင့်မလေးရှားကစားသမားနိုင်ငံခြားတွင်ကျယ်စွာအသုံးမနိုင်သေချာစေရန်သင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုယူမထားဘူး။ အင်တာနက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးခွင့်ရှိသည်၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ထိုက်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။
အားကစားအပေါ်ကမ်းလွန်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များအသုံးပြုတဲ့အခါ, မလေးရှားကစားသမားအာရှရှိရုံးခန်းများရှိသူ Bookmakers ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲဖို့လိုလားကြပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒေသခံကစားသမားများအတွက်အကောင်းဆုံး option ကို - အင်တာနက်ကဖီးနှင့်အာရှက်ဘ်ဆိုက်များအွန်လိုင်းအားကစားလောင်းကစားကိုရှောင်ကြဉ်ရန်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဘဏ်များမလေးရှားငွေလွှဲထံမှအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များအားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဤနည်းဥပဒေတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထား, နှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာကစားရန်ဆန္ဒရှိသူမလေးရှားလောင်းကစားသမားတွေမပါ, ဒီတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်အကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအော်ပရေတာအချို့ကိုပင်မလေးဘာသာစကားမှာ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆက်ကပ်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်မလေးရှားကနေကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
အာရှမြို့ကြီးများအတွက်လောင်းကစား - စင်္ကာပူ
စင်္ကာပူ၏မြို့-ပြည်နယ်ခရီးသွားဧည့်ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးအပေါ်ထိပ်တကျိပ်တို့တွင်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးလူဦးရေသိပ်သည်းမှုရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့အာရှယဉ်ကျေးမှု၏တန်ခိုးအာနုဘော်ကိုသိနှင့်သင့်ကံကြိုးစားကြဖို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကဒီမှာလာကြ၏။ အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့အပျြောအပါးမှာအနားယူနှင့်ကစားရန်? အဘယ်အရာကိုမြင်သနည်း CasinoTopLists အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းဤတိုင်းပြည်များတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားအမှုအရာအကြောင်းကိုပြောပြပါ။
စင်္ကာပူ - ပထဝီနဲ့သမိုင်းတစ်နည်းနည်း;
လောင်းကစား 2005 ကတည်းကဥပဒေရေးရာဖြစ်၏
ကာစီနို« Marina Bay Sands »;
ကာစီနို« Resorts World Sentosa »။
စင်္ကာပူတွင်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ - တားမြစ်ထားသောပိတ်ဆို့သည်ကစားသမား6လအထိတစ်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်များရနိုင်,
စင်္ကာပူ - မလေးရှားနှင့်အင်ဒိုနီးရှား၏ကျွန်းများအားဖြင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ (63 ကျွန်းများနှင့်အတုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်သည့်ဧရိယာ), ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဤတိုင်းပြည်တတိယရာစုအ Annals အတွက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 15-16 ရာစုနှစ်များတွင်တိုင်းပြည် Johor ၏ Sultan ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ကိုလိုနီဖြစ်လာခဲ့သည်။
နောက်ထပ်စင်္ကာပူမလေးရှား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ 1965 ခုနှစ်, တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကြေငြာများနှင့်ပြည်နယ်များ၏မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလုံးဝမှီခို (ပင်သောက်သုံးရေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအတွက်ဝယ်ကြရသည်) နှင့် "တတိယကမ္ဘာ" ၏နိုင်ငံများတွင်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြည်နယ်ဖြစ်လာသည်။
အစိုးရအနေဖြင့်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ, လီကွမ်ယူး (1959-1990) ကစားထားပြီးစင်္ကာပူ၏သမိုင်းအတွက်, ဤပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်သာယာဝပြောတဲ့ပြည်နယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အခုတော့တိုနီတန်အမည်ရှိသောသမ္မတနှင့်အတူပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူ - ကန့်သတ်သည့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုအတူတိုင်းပြည်။ အနိမ့်အခွန်များနှင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ကော်ပိုရေးရှင်း - သူတို့ဟာအဓိကအားဖြင့်ဤနေရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲ "စီးပွားရေးရာသီဥတု" ကြောင့်နေထိုင်ကြသည်။
2005 နှစ်ပေါင်းလောင်းကစားဝိုင်းအဘို့ဤတိုင်းပြည်တွင် 40 မှတက်မယ့်ပြီးပြည့်စုံပိတ်ပင်မှုခဲ့ပေမယ့်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကိုယ်တိုင်ကဤတိုင်းပြည်များတွင်ခံစားခဲ့ရဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ယခုအချိန်တွင်စင်္ကာပူကိုတောင် Las Vegas မှနောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ, မကာအိုပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးဂိမ်းစင်တာဖြစ်လာသည်။
« Marina Bay Sands » - စင်္ကာပူတွင်အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံ
ဤရှုပ်ထွေး၏ခမ်းနားဖွဲ့စည်းပုံမှာ3မီတာ၏ 55 200 ထပ်မျှော်စင်အမြင့်သည်။ ဤအတာဝါတိုင်များ၏ထိပ်တွင်သင်္ဘော, ရေကူးကန်နှင့်အတူအိုအေစစ်တစ်ခုမျိုးတူတစ်ခုခုပါပဲ။ အဆိုပါဒီဇိုင်း Feng Shui အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ 2010 ကုမ္ပဏီ« Las Vegas Sands သည်»အတွက်အတော်လေးရှုပ်ထွေး nedavno- တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ကဒ်စက်မှုလုပ်ငန်း - အဘယ်ကြောင့်သာလျှင်2ရေခဲကိတ်ကွင်းတစ် 2561 အတွက် site ပေါ်တွင်ဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးပြီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပြင်ပရေကူးကန်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာမိုးရေအင်တုံထဲမှာရေကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်လည်းကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာများ, စားသောက်ဆိုင်များ, ကလပ်, SPA ကုမ္ပဏီ Salon, စျေးဆိုင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဓိကအဆောက်အဦအနီးတွင်ကြာ၏ပုံစံအတွက်ပြတိုက်ရှိသေး၏။ အနုပညာ, ဒီဇိုင်းနှင့်မြင့်မားသောနည်းပညာပြပွဲရှိပါတယ်။
အရာအားလုံးတည်ဆောက်ခဲ့သည့်အဘို့ရှုပ်ထွေးနှင့်သင်တန်း၏မီးမောင်းထိုးပြ, - တစ်ဦးလောင်းကစားရုံ။
ရှုထောင့် « Marina Bay Sands » အထင်ကြီးစရာ - 15,000 sq.m. ဤတွင်, လောင်းကစား၏မိတ်ဆွေတို့ကို 2300 ကစားသမား slot နှစ်ခု play နိုင်ပြီး, မိမိတို့၏အာရုံကို Pai Gow Poker ဖို့ဂန္ကစားတဲ့နှင့် Baccarat ကနေအားလုံးသိကြဂိမ်း 600 စားပွဲကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ နေ့တိုင်းအကြောင်းကို 25,000 ဧည့်သည်များရှိပါသည်။
ကာစီနို« Resorts World Sentosa »
အဆိုပါလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ် Sentosa ကျွန်းပေါ်အနည်းငယ်အစောပိုင်းက« Marina Bay Sands »ထက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစိမ်းရောင်၏တွေအများကြီး (၎င်း၏ဗိသုကာရှုပ်ထွေး၏ဒီဇိုင်းကိုကယ်တင် postorayus) နှငျ့ဖျြောဖွရေးရှိပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးအဆိုပါရေကြောင်းပြတိုက်«အဆိုပါရေကြောင်းအတွေ့အကြုံကိုပြတိုက်»« Universal Studios ကစင်္ကာပူ»အပန်းဖြေ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးငါးမွေးကန်များနှင့်ရေပန်းခြံအများကြီးနဲ့အပန်းဖြေပန်းခြံ, Feng Shui «အိပ်မက်များ၏ရေကန်»၏သွန်သင်ချက်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်စမ်းရေတွင်းဖြစ်၏ ။
ကာစီနိုထိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဂိမ်းက၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အမျိုးစုံနှင့်အတူစိတျစှဲ။ ကာစီနိုအင်္ဂါရပ် - အံ့ဖှယျဖန်ပန်းပု။ ငွေပေးချေမှုသည်ချက်ချင်းလုပ်နေကြတယ်, Non-ယမကာတာဝန်ခံအခမဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်။
စင်္ကာပူ၏နေထိုင်သူများအဘို့အတင်းကျပ်သောဥပဒေများရှိပါတယ် - သူတို့ကလောင်းကစားရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုခွင့်များအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအကြောင်းကို $ 100 ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပတ်လည်ခရီးစဉ် $ 2,000 များအတွက်လက်မှတ်ကိုဝယ်ကြလော့။ ဒါကြောင့်အစိုးရကတက်ကြွစွာ Gambler တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ် - တိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ "အနက်ရောင်စာရင်း" ရှိပါတယ်။ ဒါကပိုက်ဆံချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမှပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်မှကျတတ်၏။
နိုင်ငံခြားသားများရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအဘို့။ သင်က 21 ဖြစ်နှင့်သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရောက်စေဖို့ရှိရမည်။ အဲဒီမှာနိမ့်ဆုံးအဝတ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သင့် code- စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်မဟုတ်ကမ်းခြေ (ဘောင်းဘီတိုနှင့်သငျသညျခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ-flops လှန်) လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများဆောက်လုပ်ခြင်းပြီးနောက်စင်္ကာပူအစိုးရအွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏န့်အသတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလေးအနက်ထားစဉ်းစားရန်။ ငွေကိုတိုင်းပြည်ကနေဝေးစီးဆင်းခဲ့ပါဘူး။ ဗီဒီယိုက slot နှစ်ခုမှအစောပိုင်းကဆိုလျှင်, Blackjack နှင့်ကစားတဲ့အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ပြည်နယ်၏ "လောင်းကစားဝိုင်းမူဝါဒက" ၏ဆွေးနွေးချက် 2014 ထွက်သယ်ဆောင်နေကြခြင်းနှင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံခြား Bookmakers နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအော်ပရေတာများအတွက်အင်တာနက်ကို space ၏ပြီးပြည့်စုံသောပိတ်သိမ်း၏မျက်နှာသာအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကတည်းက 2015 ၏အစအဦး IBCBet, SBOBET နှင့် MaxBET ကဲ့သို့သောအော်ပရေတာပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ အားလုံးအကြောင်းကို 100 အင်တာနက်ဆိုက်များတွင်သော့ခတ်အောက်မှာလာ၏။ ဂိမ်းအွန်လိုင်းတရားမဝင်ဘွတ်စဉ်အတွင်း, သင်ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 275 000 ၏ပမာဏအတွက်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်6လအထိထောင်ဒဏ်ရနိုင်သည်။
စင်္ကာပူမသာယင်း၏ကွဲပြားခြားနားဗိသုကာနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရောင်အဘို့, သင့်ဖန်စီကြာ, ဒါပေမယ့်လည်းဖျော်ဖြေရေး။
ရဟတ် ။ နေရပ်လိပ်စာ: နာရီပတ်ပတ်လည် 30, Raffles ရိပ်သာလမ်း။ ကိုယျတျောနှငျ့သငျမိုးမျှော်တိုက်များနှင့်မလေးရှားနှင့်အတူပင်အင်ဒိုနီးရှား (cloudless လျှင်) ၏လှပသောမြင်ကွင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကို - 165 မီတာ။ တစ်ဦးအဆင်ပြေလေအေးပေးစက်တောင့ဖြစ်ပါသည်, အပြည့်အဝစက်ဝိုင်းအကြောင်းကို 30 မိနစ်ကြာ
အပန်းဖြေပန်းခြံစတူဒီယိုက Universal ။ နေရပ်လိပ်စာ: 8 Sentosa Gateway မှာ။ သငျသညျစီးကြိုက်နှစ်သက်လျှင်။ ပြပွဲနှင့်ဝိုင်း Enchanting - သင်ဒီမှာ။
optical ထင်ယောင်ထင်မှားပြတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ: 26 Sentosa Gateway မှာ, Resorts World Sentosa ။ အဆိုပါပြတိုက် 100 ပန်းချီကားများနှင့် 3D ထက်ပိုရှိပြီးမည်သူမဆိုဓာတ်ပုံကိုယူအပေါင်းတို့နှင့်သက်သေခံပစ္စည်းများကိုလက်တို့ကိုမထိနိုင်။
ပန်းခြံ "ကိုညဉ့် Safari က" နှင့် "မြစ်ဆာဖာရီ" ။ နေရပ်လိပ်စာ: လမ်း Mandai ရေကန်။ အကြောင်း 2500 တိရိစ္ဆာန်များနှင့် 6,000 မြစ်တိရိစ္ဆာန်များသည်ဤဥယျာဉ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ 35 မိနစ်များအတွက်ကြီးမားသောပန်းခြံကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်တဲ့ပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်နှင့်အတူတစ်လမ်းရထားရှိပါသည်။
Clarke စီးတံတား ။ တည်နေရာ: မြေအောက်ရထားမှတ်တိုင် - Clarke စီးတံတား။ ဖျော်ဖြေရေး, စမ်းရေ, စျေးဆိုင်များနှင့်ဘားတှေအမြားကွီးခရီးသွားလမျးလြှောကျသှားခွငျး။ များသောအားဖြင့်ညဥ့်အခါမှာအလွန်မြင့်မားလှုပ်ရှားမှု။
10 မိနစ်ကုမ္ပဏီဖွင့်ပါ - rgistratsii ဥပဒေရေးရာ entity အဘို့ဤမျှလောက်လိုအပ်နေ;
ဒီမှာညဥ့်မျိုးနွယ် "Formuly- 1" ဖြစ်ပါတယ်
3 အာရှမြို့ကြီးများအတွက်လောင်းကစား - စင်္ကာပူ